Viewbix: Ataovy mifandraika ny horonantsary Youtube | Martech Zone
Viewbix: Ataovy mifandraika ny horonan-tsarinao Youtube
Alatsinainy, May 13, 2013 Alarobia, Novambra 5, 2014 Douglas Karr
viewbix manome hery ireo orinasa hampiasa ny horonantsarin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana fampiharana mifandraika sy fizarana an'io traikefa io amin'ny tranonkala, tambajotra finday sy tambajotra sosialy.
Ireo orinasa dia mitady fomba hanamafisana ny tratrany manerana ny tranonkala, tambajotra finday ary tambajotra sosialy. Omaly izy ireo dia nizara horonantsary manantena ny hitondra fivezivezena. Androany, mifampizara fifandraisana feno izy ireo viewbix izay mamela ny mpanjifany hirotsaka sy hifampiraharaha eo am-pijerena ny lahatsarin'izy ireo.
Maherin'ny 20% ny mpijery mijery horonantsary ao a viewbix tsindrio ny bokotra fiantsoana hetsika na miasà amin'ny fampiasa iray farafaharatsiny ao anatin'ny mpilalao. Viewbix dia manara-maso ny hetsika rehetra mitranga amin'ny mpilalao ary mitatitra ireo valiny ireo mba hahafahan'ny mpanjifanay manatsara ny mpilalao azy amin'ny fampiharana mahomby indrindra.
viewbix manohana Youtube, Facebook, Vimeo Pro sy horonantsary antoko fahatelo hafa ary manana rindrambaiko roapolo mahery ary mitombo! Rehefa manohy mitombo sy mahazo hery isika, ny fivoarana voajanahary dia ny fisian'ny tsenan'ny horonan-tsary Viewbix sy ny rafitra eco ho an'ny SMB sy ireo orinasa manome fitaovana ho azy ireo amin'ny tranonkala.
Atsofohy ao anaty ny lahatsarin'izy ireo izay mijanona ho mahay mandanjalanja rehefa mizara amin'ny Facebook sy tranokala hafa ianao.
Angony ny adiresy mailaka amin'ny alàlan'ny horonantsary noho ny fidiranay amin'ireo mpanome tolotra mailaka mailaka.
Fanadihadiana video feno
Mpilalao azo ekena tanteraka miaraka amina safidy fiantsoana maro
Fampidirana sy fizarana fampitaovana amin'ny haino aman-jery sosialy
viewbix miasa miaraka amin'ny fitaovana finday.
viewbix dia mifototra amin'ny maodely freemium. Manolotra ny vokatra fototra misy anay izy ireo ankehitriny, anisan'izany ny mpilalao maimaim-poana 2 ary koa ny drafitra Pro manomboka amin'ny $ 19.95 ho an'ny mpilalao marika, fampiharana premium ary fanadihadiana amin'ny antsipiriany.
Tags: horonan-tsary facebookhoronan-tsary mifandrayantso video ho an'ny hetsikahoronan-tsary ctaendrika videojereo bixVimeoYouTube
Fanamboarana automatisation sy marketing ho an'ny nomerika
May 20, 2013 amin'ny 7: 51 AM
Vokatra lehibe, izany indrindra no nahatonga ahy hisoratra anarana amin'ity bilaogy ity.
May 20, 2013 amin'ny 8: 02 AM
Misaotra Gavin! Mankasitraka indrindra.